Tufaaxa - Waxaan ka imid Mac | Waxaan ka imid Mac (Bogga 12)
Waxaan ku tijaabinay Satechi USB-C dekedda loogu talagalay iMac, taas oo marka lagu daro kor u qaadista shaashadda ay ku siineyso toddobo dekadood oo isku xira dhinaca hore
Ka hel dhammaan macluumaadka sawirka macOS Mojave
Ka hel dhammaan macluumaadka sawirka macOS Mojave. Adiga oo dooranaya xulashooyinka kujira horudhaca Raadiyaha
Alfred 4, nooca cusub ee mashiinka raadinta caanka ah ayaa la filayaa inuu yimaado bisha Juun
Alfred 4, nooca cusub ee mashiinka raadinta caanka ah ayaa la filayaa inuu yimaado bisha Juun. Waxay ku timaaddaa awood dheeri ah markay tahay raadinta oo la jaanqaadaysa OpenSearch
Astaamaha haadka baaskiil cusub ee Jarmalka ayaa u muuqda mid aad u eg kan Apple, sida ay sheegtay shirkadda
Apple waxay dooneysaa in adeegga haadka cusub ee wadista baaskiilka ee Jarmalka uusan adeegsan astaantiisa hadda, oo ah astaan ​​la mid ah ta Apple, inkasta oo ay ku kala duwan yihiin.
Qayb cusub oo ka mid ah podcastapple oo aan idinla wadaageyno fikradaha iyo wararka xilligan ka imanaya dunida Apple iyo teknolojiyadda. Adigu isqor
Elgato waxay soo bandhigeysaa Dock cusub oo leh dekedo badan
Elgato waxay soo bandhigeysaa Dock cusub oo leh dekedo badan oo nooca Pro ah ah. Ilaa iyo 12 dekedood, taas oo suurtagal ka dhigeysa in lagu bixiyo xiriir kale oo dheeri ah
Display Luna wuxuu na siiyaa fikrad dhan-shaashadda MacBook ah
Fikradaha marwalba waa lagusoo dhaweynayaa waxaan ka imid Mac oo maanta waxaan rabnaa inaan ku tusno mid ka mid ah barnaamijka 'Luna Display' ee dhammaan shaashadda 'MacBook'
Apple wuxuu sii daayaa beta beta afaraad ee macOS 10.14.5 Mojave loogu talagalay horumariyeyaasha
Apple wuxuu sii daayaa beta-kii afaraad ee macOS 10.14.5 Mojave ee loogu talagalay horumariyeyaasha. Isbedelada lama oga khaladaadka marka laga reebo hagaajinta guud ee nidaamka
Matxafka 'Fundació Joan Miró' ee ku yaal magaalada Barcelona ayaa ah meesha loo doortay Maanta kal-fadhiyada Apple
Apple waxay ku dartay madxafka Fundació Joan Miró ee ku yaal magaalada Barcelona si ay u siiso Maanta kulankeedii Apple muddo
Kuwani waa qaar ka mid ah sheekooyinka Siri ee macOS
Kuwani waa qaar ka mid ah astaamaha cusub ee Siri ee macOS. Hadda waxaan kaa codsan karnaa inaad na soo hesho iPhone-ka ama aad na tusto furayaasha furaha Keychain
Sida loo kiciyo isku xirka bluetooth-ka ee Mac-ga aan lahayn trackpad ama jiirka
Hoos waxaan ku tusaynaa sida aan udhaqaajin karno isku xirnaanta bluetooth-ka ee qalabkeena adigoon isticmaalin jiirka ama trackpad
Gawaarida tijaabada ee Apple ayaa lumiya cutubyo
Apple waxoogaa dhaawacyo ah ayaa ku jira liistada gawaarida loo heli karo mashruuca Titan. Kuwani kama horjoogsanayaan in horumar dheeraad ah laga gaaro mashruucan
Yoink waa la cusbooneysiiyay isagoo u oggolaanaya inuu ka faa'iideysto Kaamirada Sii wadida howlaha kale
Yoink waa la cusbooneysiiyay isagoo u oggolaanaya inuu ka faa'iideysto Kaamiradda Sii-wadista, waxay u oggolaaneysaa inay magac u yeelato faylasha la soo dhoofiyo iyo inay kaydiso feyl ka dib markii ay dhoofiso
Sideed file uga tirtiri kartaa qashinka haddii uusan si otomaatig ah u tirtirin
Sideed file uga tirtiri kartaa qashinka haddii aan si toos ah loo tirtirin. Waxaan kuu sharxeynaa sida loo sameeyo talaabooyin fudud.
Shaashadda LG UltraFine 4k dib dambe ugama iibinayso websaydhka Apple
Shaashadda LG UltraFine 4k dib dambe ugama iibinayso websaydhka Apple. Taabadalkeed, qaabka 5K wali waa la heli karaa.
ToothFairy codsiga si loogu maareeyo AirPods leh Mac-ga waa la cusbooneysiiyay
ToothFairy codsiga si loogu maareeyo AirPods-ka Mac-gaaga waa la cusbooneysiiyay. Hadda waxay taageertaa Powerbeats Pro iyo Powerbeats 3
Evernote ee horumarinta Mac waxay hagaajinayaan godka amniga
Soosaarayaasha Evernote ee Mac waxay hagaajinayaan daloolka amniga. Dhiraj Mishra oo ah cilmi baare dhanka amaanka ah ayaa soo ogaatay cilada oo ay ku wargalisay shirkada
MacOS 10.15 waxaad ku diri kartaa codsi kasta shaashadda dibadda
Si tartiib tartiib ah ayaan u baranaynaa faahfaahinta nooca soo socda ee macOS, oo aan arki doonno bilawga Sebtember. Mid ka mid ah…
Tigidhada ardayda ee sanadkan loo yaqaan WWDC waa la qaybiyey
Apple waxay bixisaa tigidhada 350 oo leh hoyga iyo kharashaadka la siiyo ardayda gashay sawirka WWDC
Angela Ahrendts ka sii mid ahaanshaha shaqaalaha Apple
Madaxa tafaariiqda ee Apple 5tii sano ee la soo dhaafay, Angela Ahrendts ayaa joojisay ka mid noqoshada shaqaalaha Apple.
Apple Music Cusbooneysiinta "Adiga Adiga" Talooyin Fiican
Apple Music waxay cusbooneysiineysaa "Adiga Adiga" talooyin fiican. Kudar liistada "Lagu Sameeyay Dhoolacadeynta" ama "Si dhakhso ah u bilow" si aad u maqashid waxa ugu fiican daqiiqad kasta.
Muxuu u dhigmaa Windows F5-ka Mac-ga
Shaqada caanka ah ee loo yaqaan 'F5' oo dib loogu soo rogo bog internet ah Windows, macno ahaan waxay u dhigantaa Mac. Waxaan ku tusineynaa waxay tahay iyo sida ay u shaqeyso.
Isticmaalka Clicker ee macOS waxaad ku daawan kartaa Netflix oo aad ka maamuli kartaa Touch Bar
'Clicker' ee macOS waxaad ku daawan kartaa Netflix oo aad ka maamuli kartaa Touch Bar sidoo kale waxay leedahay shaqooyin horumarsan oo lagu hagaajinayo khibradeena.
Agaasimaha Disney wuxuu kusii nagaan doonaa guddiga sare ee Apple, ugu yaraan hadda
Ka dib markaan daawaday soo bandhigida Disney's VOD, oo loo yaqaan Disney +, falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in mowqifkiisa guddiga Apple uusan qatar ku jirin.
MagSafe patent, tvOS wuxuu caqabad ku yahay Apple Watch iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Mar labaad waxaan kuu soo qaadaneynaa soo koobid leh qaar ka mid ah wararka muuqda ee toddobaadkan ee aan ka imid Mac
Sirdoonka macmalka ah ayaa awood u yeelan doona inuu hagaajiyo midabada sawirka qaybta xigta ee Pixelmator Pro
Pixelmator Pro waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan adduunka ee lagu yaqaan 'image editing' iyo halabuurka ...
Patent kale oo Apple ah ayaa diiwaangashan oo aan jeclaan lahayn inaan ku aragno Macs
Bixinta Apple-ka ayaa leh Aqoonsiga Face-ka ee loogu talagalay Mac-yada iyo Aqoonsiga Taabashada ee teebabka Bluetooth. Tani waxay ka dhowdahay sidaan filayno
Disney + ayaa dhowaan imaaneysa Apple TV
Bob Iger laftiisu wuxuu saadaalinayaa imaatinka adeegiisa 'Disney + streaming TV' ee Apple TV-yada
Tani waa fikradda fudud ee cajiibka ah ee shaqada Thomas Weinreich ee 'Split View'
Thomas Weinreich wuxuu ina tusayaa fikrad ah sida shaqada Split View loo wanaajin karo loona fududeyn karo ugu badnaan
Apple waxay dhaaftay bartilmaameedka tamarta nadiifka ah ee alaab-qeybiyeyaasheeda 25%
Apple waxay dhaaftay bartilmaameedka tamarta nadiifka ah ee alaab-qeybiyeyaasheeda 25%. Ilaa iyo 44 alaab-qeybiyeyaal Apple ah ayaa ka shaqeynaya mashruuca tamarta nadiifka ah.
Rapper Wiz Khalifa si uu u daawado "Gadaasha Dambe" Apple Music Abriil 17
Muusiga muranka badan dhaliyay ee Wiz Khalifa si uu ugu soo bandhigo "Gadaasha Dambe" Apple Music Abriil 17
Maraakiibta Mac-du ma koraan laakiin saamigooda suuqa ayaa weli ah mid deggan sida uu qabo Gartner
Marka loo eego tirooyinka maraakiibta Gartner, iibka PC wuxuu sii wadaa inuu hoos u dhaco. Si kastaba xaalku ha ahaadee, Apple waxay haysaa saamiga suuqa ee wanaagsan
Loolan cusub oo loogu dabaaldegayo Maalinta Dunida
Dabaaldegga Maalinta Dunida, Apple waxay soo jeedineysaa loolan cusub oo noo oggolaanaya inaan ku helno calaamadda guusha cusub ee Apple Watch
Fiidiyowga cusub ee Apple Watch ee kor u qaadaya xarkaha
Apple ayaa soo dhigtay xayeysiis cusub kanaalka ay ku leedahay YouTube halkaas oo ay naga siineyso muunad ah xarkaha kala duwan ee ay u diyaariyaan taxanaha 4.
Nooca xiga ee macOS wuxuu soo bandhigi doonaa muusig madax-bannaan, barnaamijyo Podcast iyo barnaamijyada TV-ga
Nooca xiga ee macOS wuxuu soo bandhigi doonaa muusiko madax-bannaan, barnaamijyo Podcast iyo barnaamijyada TV-ga, sida lagu sheegay xanta ay xaqiijisay 5to9Mac
Waxaan uga baxeynaa dhacdo cusub Podcastapple oo aan uga hadlayno qaar ka mid ah wararka ugu xiisaha badan adduunka Apple
Saxiixii ugu dambeeyay ee Apple wuxuu la xiriiraa xaqiiqda la kordhiyay iyo tan dhabta ah
Apple wuxuu sii wadaa inuu sharad ku sameeyo xaqiiqda la kordhiyay wuxuuna saxiixay aasaasaha shirkad ku takhasusay fiidiyowyada la kordhiyay iyo kuwa muuqaalka ah.
Ku rakibida Apple toughens codsi ka yimid macOS 10.14.5
Apple waxay adkeyneysaa rakibida codsiyada sida macOS 10.14.5. Codsiyada waa inay ka gudbaan koontaroolo adag si uu u aqbalo albaabka
Julianne Moore oo ku jileysa Sheekada Lisey, oo ah taxane cusub oo Apple ah oo ku saleysan Buugga Stephen King
Taxanaha cusub ee ka mid noqon doona buugga Apple TV + wuxuu ku saleysan yahay sheeko uu qoray Stephen King waxaana jilaya Julianne Moore waxaana soo saaray JJ Abrams.
Apple wuxuu sii daayaa noocyada beta 2 ee macOS, tvOS, watchOS iyo macruufka loogu talagalay horumariyeyaasha
Dhammaan noocyada beta 2 ee macOS, tvOS, watchOS iyo macruufka ayaa hadda loo heli karaa horumariyeyaasha
Ember wuxuu kordhiyaa cabbirka koobkaaga oo cabitaankaaga diirimaad ka dhigaya
Muusiga birtu wuxuu ku hayaa kafeega ama shaaha heerkulka la doortay. Hadda waxay sidoo kale bilaabaan koob weyn
Shahaadadu waxay naga dhigeysaa mar labaad mid ku faraxsan soo laabashada MagSafe
Apple wuxuu leeyahay nooc ka mid ah isku xiraha MagSafe ee USB C. Shaki la'aan way fiicnaan lahayd haddii ay maalin uun soo saaraan isku xiraha noocan ah
Canshuur yar Shiinaha, ING Direct Airpods aan dib loo hagaajin karin oo leh Apple Pay, iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Hal maalin oo Axad ah waxaan soo qaadaneynaa sida ugu fiican usbuuca ee Soy de Mac kiiskan waxaan haynaa warar aad u xiiso badan oo yimid usbuucaan ugu horeeya ee bisha Abriil
Shakhsiyeelo AirPods-kaaga 2 ee 64 midab mahad leh ColorWare
Shakhsiyeelo AirPods-kaaga 2 ee 64 midab mahad leh ColorWare. Iyaga waxaan haysanaa waxoogaa AirPods asal ah oo noqon doona hinaase dad badan.
Apple Music horeyba waxay u leedahay macaamiil ka badan Spotify gudaha Mareykanka
Apple waxay ka sarreysaa shirkadda Spotify adeegyadeeda muusikada ee Apple Music. Hada waa hogaamiye Mareykan
Burburinta Apple waxay qorsheyneysaa inay ka furato Apple Store cusub Australia
Mar labaad, shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino waxaa lagu qasbay inay joojiso qorshayaasheeda ah inay furto dukaamo cusub. Hada Australia.
BBEdit wuxuu ku noqdaa dukaanka arjiga ee Mac App Store.
BBEdit wuxuu ku noqdaa dukaanka arjiga ee Mac App Store. Abku wuxuu u wareegayaa qaabka rukunka wuxuuna keenayaa astaamo cusub oo cusub.
Apple wuxuu hoos u dhigayaa qiimaha HomePod ee ka dhanka ah dhammaan khilaafaadka
At Apple waxay go'aansadeen inay hoos u dhigaan qiimaha HomePod adduunka oo dhan inkasta oo aysan jirin wax nooc labaad ah, oo aan la fileynin
Apple ayaa joojisay qorshihii ay ku furaysay Apple Store Israel
Shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino ayaa baajisay qorshayaasheeda ballaarinta ee Israel, iyada oo heshiis la gaari kari weyday goobta ay dooratay
Wax soosaarka xayeysiiska cusub ee Apple oo ay kujiraan sanduuqa pizza wareega
Apple wuxuu soo bandhigayaa xayeysiis cusub oo diirada saaraya wax soo saarka iyo wada shaqeynta iyadoo leh muuqaalka sanduuqa wareega pizza
Xusuusta xusuusta oo uu saxiixay Steve Jobs ayaa u socota xaraashka
Maalmo yar gudahood, ayaa lagu xaraashayaa xusuus qor xusuus leh oo uu saxeexay Steve Jobs oo ku qaddarinaya 10-kii sano ee u huray shirkadda Apple shaqaale.
Sida loo isticmaalo AirDrop ee Mac
Sida loo wadaago faylasha by AirDrop on Mac? Waxaan kuu sharraxeynaa sida ay u shaqeyso, shuruudaha loo adeegsado Mac iyo xalka dhibaatooyinka ugu badan.
Eddy Cue wuxuu si isdaba joog ah u booqday Washington Post iyo xarunta dhexe ee New York Times si loogu daro Apple News +
In kasta oo Eddy Cue booqashooyin isdaba joog ah ku tagayo wargeysyada waaweyn ee Mareykanka, kaliya WSJ ayaa ogolaatay inay muujiso qeyb kooban oo ka mid ah waxyaabaha ay ka kooban tahay News +
Macaamiisha ING hadda waxay ku dari karaan kaarkooda Apple Pay
ING waxay ku shaqeysaa adeegga lacag bixinta iyada oo loo marayo Apple Pay ee dalkeena macaamiisheeda
Apple waxay soo bandhigi doontaa natiijooyinka maaliyadeed ee Q2 bisha Abriil 30
Apple waxay dib ugu laaban doontaa warbaahinta horteeda iyo maalgashadayaasha 30-ka Abriil si ay u muujiyaan natiijooyinka maaliyadeed ee Q2
Si toos ah ugu soo hagaaji emaylka websaydhada mahadsanid Furitaanka Webmail
Si toos ah ugu soo hagaaji emayl adoo u mahadcelinaya Furitaanka Webmail-ka oo ka xulo emaylkaaga liis dheer oo adeegyo ah
Qoraalka qoraalka iyo qoraalka qoraalada wuxuu yimaadaa macOS
Codsiga tifaftiraha qoraalka qoraalka wuxuu ku yimaadaa macOS bilaash iyo isdhexgal iyada oo loo marayo iCloud si loo helo wax soo saar
Apple muxuu sameeyaa si uu dakhli iyo waxtar uga helo kaarka Apple haddii uusan lahayn guddiyo? Kuwani waa farsamooyinka ay calaamaddu u isticmaasho inay lacag ku hesho.
Haysashada iMac Pro oo leh 256GB oo RAM ah waxay ka dhigan tahay inaad ka iibsanayso Apple Apple
Haysashada iMac Pro oo leh 256GB oo RAM ah micnaheedu waa inaad si gaar ah uga iibsato Apple, qiimaha of 6240 kordhinta
Shaki badan iyo macluumaad yar: tani waa waxa kaliya ee Apple uusan ku cadeyn dhacdadiisa "Waa waqtigii show"
Apple miyey cadeysay wax walba oo ku saabsan adeegyadeeda cusub ee Muhiimka ah "Waa waqtigii show"? Maya, kuwani waa su'aalaha ay soo saareen Apple Card, Arcade, Channels iyo TV +.
Qeybta toddobaadkan ee Apple Podcast ayaa hadda la heli karaa. Ma waayi kartid tan
Bixinta guga Amazon ayaa maanta bilaabanaya. Ka faa'iidayso iyaga!
Amazon waxay maanta ku bilaabatay dalabkeedii guga waana kuwan qaar ka mid ah wax soo saarka aad ku heli karto qiimo dhimis
Jiilka afraad ee Apple TV ayaa hada loo yaqaan Apple TV HD
Apple waxay bedeshay magaca jiilka 4aad ee Apple TV, kaasoo loo bixiyay Apple TV HD.
Fiidiyowyada Apple Keynote, oo hadda laga heli karo YouTube
Apple waxay mar hore si rasmi ah ugu daabacday kanaalkeeda YouTube-ka fiidiyooyinkii kaladuwanaa ee lasocday Dhigeeda "Waa waqtigii showga" Halkan ka baro!
Apple Arcade, adeegga cusub ee fiidiyowga ee Apple
Apple ayaa soo saartay Apple Arcade adeeg cusub oo loogu talagalay ka qayb qaadashada ciyaarta fiidiyowga
Apple News cusub ayaa rasmi ah! Waxaa laga heli karaa Mareykanka iyo Kanada
Apple wuxuu bilaabayaa cusbooneysiinta Apple News ee muhiimka ah ee bisha Maarso
Apple wuxuu kuqabtaa furaha koowaad ee sanadka 2019 Apple Park
Haddii aad rabto inaad maamusho maktabadda muusikada ee aad illaa hadda ku kaydisay iTunes si aad u nuquliso ama u dhaqaaqdo faylasha, markaa waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo.
Ipad cusub, iMac cusub, AirPod cusub iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaadka xiisaha leh marka la eego wararka ay soo bandhigtay Apple iyada oo aan la sameynin wax muhiim ah
Kudar kaarkaaga deynta ku dar Safari macOS oo si dhaqso leh u bixi
Ku dar kaarkaaga deynta Safari si macOS ay u bixiso si dhakhso leh. Casharkaan waxaan ku tusineynaa sida loogu daro kaararka deynta lacag bixinta.
Sidee looga helaa qiimo dhimista ardayda Apple
Waxaan ku tusineynaa tillaabooyinka fudud ee ay tahay inaad qaado si aad ugu iibsato wax soo saar Apple ama barnaamij software ah oo loogu talagalay kuleejka
Ikea iyo Sonos SYMFONISK afhayeenka ayaa imanaya Abriil
Sonos iyo Ikea si ay u soo bandhigaan SYMFONISK aftahan ah bisha soo socota
Hal dhacdo oo dheeri ah oo ka mid ah barnaamijkeena 'Podcast' kaas oo aan uga hadleyno muhiimada Apple ee mowduucyo kale oo badan oo tikniyoolajiyadda hadda jira ah
Sida loo joojiyo tababarka maalinta ee Apple Watch
Jooji ogeysiisyada waxqabadka ee imanaya Apple Watch-gaaga maalin aadan sameyn karin jimicsigaaga maalinlaha ah
Sida loo kiciyo qaabka mugdiga ah ee Google Chrome ee loogu talagalay Mac
Habka mugdiga ah ee Google Chrome ayaa hadda laga heli karaa asal ahaan macOS illaa nooca 73 ee biraawsarka Google.
Apple ayaa baahin doonta astaamaha muhiimka ah ee ka soo gudbinaya degelkeeda
Toos u socodka tooska ah ee muxaadarada ayaa lagala socon karaa websaydhka Apple
Calaamadaha Apple News ayaa laga helay macOS ugu dambeeyay Mojave beta
Calaamadaha Apple News ee laga helay beta-kii ugu dambeeyay ee macOS Mojave, waxaan arki doonnaa wararka ay Apple noo soo bandhigi doonto muhiimada koowaad ee bisha Maarso 25
Leander Kahney wuxuu horey u haystaa taariikh nololeedka Tim Cook oo diyaar u ah in la daabaco
Qoraaga Leander Kahney wuxuu horey u haystaa taariikh nololeedka agaasimaha guud ee Apple Apple Tim Cook oo diyaar u ah in la daabaco
Ulysses 15 waxay la timid daaqad qoraal kala jaban iyo maaraynta erayga muhiimka ah
Ulysses 15 waxay la timid daaqad qoraal ah oo kala qaybsan iyo maaraynta erayga muhiimka ah iyo horumarada kale. Waxaan tijaabin karnaa Ulysses 15 muddo 14 maalmood ah
Ku keydinta Apple Mac dib loo cusbooneysiiyay
Su'aasha ku saabsan keydinta Mac ee ay soo ceshatay ama dib u qiimeysay Apple ayaa had iyo jeer soo baxa marka aad iibsaneyso Mac cusub. Maanta waxaan ka jawaabeynaa
Ka saar sawirada nuqul sawirada barnaamijka macOS
Ka saar sawirada nuqul ka mid ah barnaamijka 'macOS Photos app' oo leh barnaamijka Nadiifiyaha Nuqul Sawirrada ah iyo galka Sawirrada qarxa
Aqoon la'aanta Donald Trump waxay ka dhigeysaa Tim Cook inuu ku maadeysto Twitter
Donald Trump ayaa magaca shirkadda Apple ku qaldan wuxuuna ugu yeeraa Tim Apple halkii uu ka magacaabi lahaa Tim Cook. Jawaabta Cook ayaa ah inuu magaciisa ku beddelo Twitter-ka
Apple wuxuu si aamusnaan ah u hagaajiyaa dhibaatooyinka "light light"
Apple wuxuu ku xaliyaa dhibaatooyinka "light light" aamusnaan. Apple wuxuu dheereyn lahaa fiilada MacBook Pro 2018
Sida loo dhaqaajiyo ikhtiyaarka si loo yareeyo daaqada adiga oo laba jeer gujinaya daaqada cinwaanka
Waxaan ku tusineynaa sida loo kiciyo ikhtiyaarka si loo yareeyo daaqada adiga oo laba jeer gujinaya barta cinwaanka
Kuwani waa gawaarida adag ee adag ee LaCie ee aad ka iibsan karto Apple Store
Kuwani waa gawaarida adag ee adag ee LaCie ee aad ka iibsan karto Apple Store, iyo sidoo kale kiisaska daboolaya Mac oo dhan
Faahfaahin dheeri ah ama xogo malahan dhacdada Maarso?
Si kedis ah xanta iyo faahfaahinta ku saabsan soo bandhigida Apple bishii Maarso ayaa joogsatay mana jiraan faahfaahin cusub
Sida loo wadaago iskuxirka Wi-Fi-ka Mac
Sida loo abuuro shabakad Wi-Fi ah si loogala wadaago Mac-gaaga qalab kasta qaab fudud
Sida loogu daro sawirrada Apple Watch
Waxaan ku tusineynaa sida ay u fududahay inaad sawirro ku darto Apple Watch-kaaga ka dibna u isticmaasho xitaa isla sawirada sida waraaqda gidaarka
Waxyaabaha xiisaha leh ee ka socda shaashadda macOS Mojave
Waxyaabaha xiisaha leh ee ka imanaya shaashadda guriga ee 'macOS Mojave' ee la xidhiidha qaabeynta badhannada bogga guriga
Duel of the Titans: waxaan isbarbar dhigeynaa Samsung Galaxy Buds cusub oo ka dhan ah Apple's AirPods
Miyuu cusub yahay Samsung Galaxy Buds qiimihiisu inuu iibsado in ka badan mise ApplePops-ka Apple ayaa ka fiican? Isbarbardhiggan waxaan ku tusi doonaa mid kasta sida ugu fiican.
Huawei MateBook Pro X, oo ah tartan cusub oo loogu talagalay MacBook Pro
Huawei MateBook Pro X nooca kombiyuutarada ee shirkadda Shiinaha laga leeyahay. Lagu soo bandhigay MWC waxay bixiyaan shaashad aad u fiican iyo naqshad aad u Mac ah
Tani waa sida waraaqaha uu Tim Cook u helo mahadcelin la xiriirta Apple Watch dhiirrigeliso
Waa tan waxa dhacaya iyo waddada loo maro waraaqaha mahadnaq ee Tim Cook uu u helo Apple Watch, sida lagu sheegay warbixin cusub.
Samsung Galaxy Buds waa xaqiiqo jirta wuxuuna isku dayi doonaa inuu hor istaago AirPods
Samsung waxay soo bandhigtay shalay galab waxa lafilayo inay noqdaan tartamayaasha Apple's AirPods, Samsug Galaxy Buds
Hal usbuuc ka badan waxaan soo qaadaneynaa boodhadhka loo yaqaan 'podcastapple' kaas oo aan kula wadaagno fikradaheena dhamaantiin wixii ku saabsan dunida Apple. Toddobaadkan xanta ayaa taabatay
Tani waa fikrad xiiso leh oo ah MacBook Pro cusub oo leh Face ID
Naqshadeeye ayaa na tusaya fikrad cajiib ah oo ah waxa soo socda Apple MacBook Pro noqon karo
BlackMagic Pro eGPU ayaa soo muuqda oo ka baaba'aya Apple Store
BlackMagic Pro eGPU ayaa soo muuqda oo ka baaba'aya Apple Store. Wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan inay kajawaabeyso jabinta kaydka soo saaraha.
Samsung's Galaxy Buds ayaa imaan lahaa si uu u istaago AirPods
Samsung Galaxy Buds cusub ayaa diyaar u noqon lahaa inuu wajaho Apple's AirPods waxaana la sii deyn doonaa Arbacada soo socota, 20-ka Febraayo
Sida loo sheego nooca macOS ee Mac uu socdo
Ogaanshaha kaas oo ah nooca 'macOS' ee kooxdeennu maamusho waa geedi socod aad u fudud oo aan si faahfaahsan ugu qeexanno qodobkaan.
Maxaa la sameeyaa haddii mugga Spotify ee Mac uu aad u hooseeyo
Halkan ka ogow waxa aad sameyn kartid haddii mugga Spotify ee Mac-gaagu ka hooseeyo kan codsiyada kale: xal degdeg ah oo fudud.